Jifflenow: Kedu ka ikpo okwu na nzuko a si emetụta Mmemme ROI | Martech Zone
Otutu ulo oru buru ibu na etinye ego di egwu na ihe ndi ulo oru, nzuko, na ebe ndi mmadu na-ekwu okwu na-ele anya iji mee ka onu ogugu ahia di ngwa. Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ihe omume anwalela ụdị dị iche iche na ụzọ iji gosipụta uru maka mmefu ndị a. Usoro egwu kachasị na-eduga, mgbasa ozi mgbasa ozi, na nyocha ndị bịara iji ghọta mmetụta nke ihe omume na mmata ụdị. Agbanyeghị, nzukọ bụ akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa. Iji nwee ihe ịga nke ọma, azụmaahịa ga-emerịrị nzukọ B2B dị iche iche n'onwe gị. N'ezie, ọmụmụ ihe na-egosi nke ahụ asatọ n'ime ndị isi iri na-ahọrọ nzukọ mmadụka nzukọ nzukọ. N'ihi gịnị? Nzute ihu na ihu na-eme ntụkwasị obi, mkpebi azụmaahịa nke oge ma na-eme ka echiche dị mgbagwoju anya dị mgbagwoju anya mepee ụzọ maka azụmaahịa na ịba ụba ego
Ihe omume dika ihe ngosi ahia na nleta nleta nkowa na-enye ohere maka nzukọ B2B ndị a. Agbanyeghị, ịhazi oge nzukọ ndị a na-abụkarị ibu arọ nye ndị niile metụtara ya. Tụkwasị na nke a, ndị na-eme ihe omume na-agbasi mbọ ike igosi uru nzukọ ndị a bara na otu ha si emetụta pipeline ahịa na nnweta ego. Dabere na nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, Pasent 73 nke ndị isi ọrụ chere na ndị na-ere ahịa enweghị ntụkwasị obi azụmaahịa. Site na ịre ahịa na-abụkarị ihe a na-akwụ ụgwọ, ndị na-eme ihe omume na-eche nnukwu ihe ịma aka ihu iji gosipụta nloghachi na itinye ego iji debe ma ọ bụ mụbaa oke ego ha.
Ndị na-eme ihe omume na-ejikwa ọtụtụ ihe omume n'oge ọ bụla na-ejikwa ọtụtụ usoro, na-emekọ ozi ịntanetị na azụ na oge ụfọdụ na-eji mpempe akwụkwọ iji aka iji aka ya tinye ozi a niile. Iji gosipụta uru ọ bụla n'ọrụ niile ndị ahịa na-arụ n'ime ihe omume, ọ dị ha mkpa ịchọta ngwaọrụ ndị na-enyere ha aka ịhazi, nyochaa data ma gosipụta ROI maka ihe omume ọ bụla.
N'ịga site na njikwa na-agbasa ozi
A Nzute akpaaka Platform(MAP) bụ ụdị sọftụwia na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ jikọtara ya na atụmatụ nzukọ tupu oge, njikwa nzukọ na nyocha na nzuko na nzukọ. Iji MAP eme ihe na-eme ka ohere azụmaahịa na-abawanye na ọnụọgụ nke nzukọ dị iche iche. Ọ dị irè karịsịa maka ụlọ ọrụ ndị dị mkpa iji jikwaa nnukwu ọnụọgụ nke nzukọ nzukọ na ihe omume, ebe nkenke, okporo ụzọ, nzukọ ahịa na ọgbakọ ọzụzụ.
Jiri nke a tụnyere iji njikwa nzukọ usoro nhazi usoro. Mgbe ndị na-ere ahịa jiri akwụkwọ iji gbasaa usoro nzukọ ha, ọtụtụ nsogbu na-ebilite maka ndị na-ere ahịa na ndị sonyere na nzukọ ndị a.
Njikọ Aka - Shazi usoro nzukọ ga-agụnye ọtụtụ ndị metụtara ya. Oge ụfọdụ, ọnọdụ gbanwere na mmelite ga-enyerịrị ndị sonyere nzukọ iji mee ka mmadụ niile nọrọ n'otu ibe. Agbanyeghị, mgbe ị na-eji mpempe akwụkwọ, ndị na-ere ahịa anaghị echefu onye na-emelite ederede ma ọ bụ ọ bụrụ na ndị niile sonyere na-eji otu ma ọ bụ mezie akwụkwọ.
- Dika mmadu, anyi ezughi oke nke na anyi nwere ike ihie uzo. Otú ahụ ka ọ dịkwa mgbe ị na-abanye data na mpempe akwụkwọ. Mmehie ndị a nwere ike imefu ụlọ ọrụ ọtụtụ nde dollar.
Akwụkwọ ịkpọ oku - Ọ bụ ezie na kalenda na mpempe akwụkwọ na-abụghị ngwa ọrụ kachasị mma maka ịhazi nzukọ atumatu, ha na-enye ọrụ na ijide ọtụtụ ọdọ mmiri nke data static ma na-eme atụmatụ. O bu ihe nwute, ha adighi adighi njikere ime otutu ihe ndi ozo dika ijikwa na idebe akwukwo nzuko ma obu ime mgbanwe na nzuko nzuko.
Mmekọrịta - Omume ihe omume bụ naanị otu mpempe achịcha ma a bịa n'usoro ire ahịa. Ndị na-ere ahịa na-ejikwa ọtụtụ ngwaọrụ n'otu oge iji soro ndekọ ndekọ ihe omume, na-ewepụta data site na baajị nyocha, nyochaa ndenye nzukọ, ịnweta na itinye data na na CRM na ndị ọzọ. Usoro nke dabeere na Spreadsheet na-eme ka usoro a bụrụ ihe ịma aka karị n'ihi na ha anaghị enwe ike ijikọta na nyiwe ndị a iji mepụta ahụmịhe na-enweghị ntụpọ.
Metrik na nghọta - Ihe omume, ihe ngosi ahia na ebe nkenke na-eme ka ndị na-ere ahịa nwee ọtụtụ ozi. Metrics dị ka ọnụ ọgụgụ nke nzukọ na-akpọ nabatara, nkezi azụmahịa size, ọnụ ọgụgụ nke nzukọ kwa ndibiat mechiri emechi, wdg, bara uru nke ukwuu mgbe ị na-enyocha ihe ịga nke ọma nke mkpọsa na ịmepụta ROI.
Mpempe akwụkwọ Spreads ezughi oke n'ụwa taa iji jikwaa nnukwu nzukọ nzukọ.
Ikike iji gbanye usoro ihe omume, njikwa na nyocha nke nzukọ dị iche iche na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke mmekọrịta ndị a site na 40% gaa na 200% dabere na etu ndị ahịa si arụ ọrụ nke ọma na iji teknụzụ ndị dị otú a. Ọtụtụ ụlọ ọrụ Fortune 1000 achọpụtala na iji Mpepe Akụrụngwa Nzukọ (MAP) bụ azịza dị oke ọnụ ahịa na-eweta nloghachi ngwa ngwa n'ime ihe omume abụọ mbụ yana n'ime ọnwa ole na ole mbụ ejiri na ebe mkpirisi.
Ijikwa nzukọ na mmechi mmechi na Jifflenow
Emepụtara Jifflenow iji nye ndị na-ere ahịa ihe ngwọta maka atụmatụ nzukọ nzukọ B2B, ịhazi oge, njikwa na nyocha. Site na ikpo okwu ya, ndị ọrụ nwere ohere ịnweta ngwaahịa abụọ gụnyere Nzukọ Jifflenow Event Nzukọ na Jifflenow Briefing Center na-emetụta ihe atọ niile nke usoro nzukọ nzukọ: nzukọ tupu nzukọ, nzukọ na nzukọ.
N'oge tupu nzukọ a, ịhazi ihe na ịhazi ihe. Nke a na-agụnye izipu akwụkwọ ịkpọ oku, itinye akwụkwọ na imezi ihe na kalenda. Enwere ọtụtụ ngwa ngwa iji jikwaa, mana ọ dị mkpa ka ị ghara ichefu ịkọwapụta ebumnuche nke nzukọ a. N'oge nzuko nzuko, njikwa na-eme, ịlele ndị bịara ya, ijikwa ọdịnaya niile dị mkpa, nyochaa nnweta akụrụngwa na ịdebe ọganihu nke nzukọ ahụ. N'ikpeazụ, mgbe nzukọ ahụ gafere, nyocha nwere ike ime. N'ebe a, ọ dị oke mkpa iji tụọ, nyochaa metrics ma tụọ atụmatụ mmetụ ego. Ihe ndị a niile dị oke mkpa iji nweta ezigbo azụmaahịa site na nzukọ B2B.
"Ndị na-ere ahịa agaghịzi atụkwasị obi na usoro njikwa usoro na-adịghị n'ịntanetị, akwụkwọ ntuziaka, njehie, enweghị nchebe na enweghị ike ịbawanye," ka Hari Shetty, CEO na Jifflenow kwuru. "Site na Jifflenow's Meeting Automation Platform, anyị na-enyere ndị na-ere ahịa aka iji belata ọrụ maka ijikwa nzukọ ka ha nwee ike ilekwasị anya n'akụkụ ndị ọzọ nke ọrụ ha ma hụ na nzukọ niile bụ ahụmịhe na-enweghị ntụpọ maka ndị ahịa ọ bụla."
Ọganiihu ndị ahịa na Jifflenow
Otu n'ime ndị ahịa Jifflenow gụnyere ụlọ ọrụ nkwukọrịta nkwukọrịta ihe dị n'otu. N'oge edemede a, anyị ga-atụle ụlọ ọrụ a dịka Egwu. A na-eji ụda eme ihe gburugburu ụwa site n'aka ndị ọkachamara nke oge a, ndị ọkwọ ụgbọ elu, ndị na-akpọ oku, ndị hụrụ egwu na ndị egwuregwu. N'ịbụ ndị ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ, ndị otu egwu chere ọtụtụ ihe ịma aka ihu gụnyere:
Ntinye akwụkwọ na ịhazi nzukọ n'ụlọ ọrụ ha dị iche iche na gburugburu ụwa
Ihe isi ike n'inweta ndị isi na ahịa ịzụta-maka mmemme ahụ
Site n'iji Jifflenow Briefing Center, ndị otu egwuregwu na-eme nkenke nke ọdịyo nwetara oge site na mbenata mbọ eji eziga ozi ịntanetị na-aga n'ihu maka ijikwa arịrịọ, na-ahọpụta ndị ga-eweta ma nweta nkọwa na nkwenye nzuko. Ọzọkwa, otu ụlọ ọrụ na-ere ahịa nke ọdịyo ugbu a nwere ike ịnapụta mkparịta ụka gbara gburugburu na-eweta ahụmịhe ndị ahịa nke onwe. Site na mgbanwe nke Jifflenow's Meeting Automation Platform nyere, mmemme a emeela ka ndị na-ahụ maka ndị isi na ndị ahịa na-esonye na nkwado.
Ọ bụ ikuku nke ikuku ọhụrụ. Enwere m ike ịlaghachi azụ ma lekwasị anya n'ihe ndị kwesịrị ka m lebara anya.
Onye isi oche na Audio
Rịọ Jifflenow Demo [/ njikọ]
Ndị ụlọ ọrụ chọrọ ijikwa nzukọ ihe omume nke ọma, nye ndị ahịa ahụmịhe na-enweghị ntụpọ ma wepụta ego kwesịrị ịtụle iji Jifflenow's Meeting Automation Platform, na-ezere ihe egwu na ohere ohere sitere na njikwa njikwa akwụkwọ. Site na icheghari uzo a ga - esi nweta akpaaka nke nzuko atumatu gafee ndi na - acho ahia, ndi okacha amara ahia gha enwe ike ikwu na etolite etolite na ntinye ego ma mee ka ha buru uzo di nkpa nke ahia na ahia. Iji mụtakwuo banyere Jifflenow nwere ike inyere gị aka ịhazi nzukọ na ihe omume gị ọzọ ma ọ bụ na ụlọ mkpirikpi gị, gaa na jifflenow.com.
Tags: ogbako ahia nke ikpo okwummemme ahiaihe omume ahia n'elu ikpo okwuakụrụngwa ahịaikpo okwu ahia ahia ntanetiikpo okwu webinar